Thola izinhlobo zezokuvakasha eSpain | Izindaba Zokuhamba
Izinhlobo zokuvakasha eSpain
Uma sicabanga ngezokuvakasha asicabangi ukuthi kunezinhlobo ezahlukahlukene, ngoba akuwona wonke umuntu ohamba ngezizathu ezifanayo. Empeleni kunezifunda ezinohlobo oluthile lwezokuvakasha abagxila kuzo ukuze bazuze kakhulu emphakathini wabo. Yingakho sizobona izinhlobo zezokuvakasha esingazithola eSpain.
ISpain ngokungangabazeki izwe lezokuvakasha, eliheha izinkulungwane zabantu minyaka yonke ezifuna ukujabulela izinto ezahlukahlukene, kusuka ekudlaleni komzimba kuya ezindaweni zemvelo, emabhishi noma kumasiko alo. Thola ukuthi uluphi uhlobo lwezokuvakasha olungaheha ukuthola eSpain, ngoba kunezindlela ezahlukahlukene zokuhamba.
1 Amasiko eTurismo
2 Ezokuvakasha emabhishi
3 Ukuvakasha kwe-Gastronomic
4 Ukuvakasha kwewayini
5 Ukuvakasha kwemvelo
6 I-Turismo de aventura
7 ezokuvakasha zasemakhaya
8 Ukuvakasha kweqhwa
Ukuvakasha kwamasiko bekulokhu kungenye yezinto eziyinhloko. Kulolu hlobo lwezokuvakasha sifaka leyo egxile ekutholeni umlando, izikhumbuzo, izinsalela zemivubukulo neminyuziyamu. ESpain singathola izifunda eziningi ezinomlando wazo kanye neminyuziyamu. I- Guggenheim eBilbao noma ePrado Museum eMadrid bayizibonelo ezinhle. Izikhumbuzo nazo zibalulekile njengoba sithola izindawo ezinjengeGiralda eseSeville, i-Alhambra eGranada, iSagrada Familia eBarcelona, ​​iCathedral yaseSantiago de Compostela noma leyo yaseLeón, i-Alcázar yaseToledo, leyo yaseSegovia noma i Itheyetha YaseRoma yaseMerida
Siyazi ukuthi eSpain ingxenye enkulu yezokuvakasha iqonde ogwini lwayo, ngoba nayo inesimo sezulu esihle kakhulu. Endaweni ye IMedithera sithola izindawo ezinjengeValencia, indawo yaseCatalonia futhi-ke iziQhingi zeBalearic ezinezikhungo zabavakashi ezinjengeMallorca noma i-Ibiza. Ngakolunye uhlangothi, kunabantu abaningi abathanda amabhishi ase-Andalusia noma abanquma ukuya eCanary Islands, ejabulela isimo sezulu esihle unyaka wonke.
Akungabazeki ukuthi iSpain ingenye yezindawo ezine-gastronomy enhle kunazo zonke eYurophu ngakho-ke ezokuvakasha nge-gastronomic zingenye zezinto ezihehayo kakhulu. Enyakatho kunezinhlanzi ezinkulu nezinhlanzi zasolwandle. Eqinisweni iBasque Country, iRioja noma iGalicia ngenye yezindawo izintandokazi zokuvakasha kwe-gastronomic ngekhwalithi ephezulu yezitsha nemikhiqizo yayo. E-Andalusia sithola enye yezindawo eziyintandokazi zama-tapas. Ngaphezu kwalokho, kulezi zindawo kujwayelekile ukuthola imikhosi eyenzelwe i-gastronomy, ebuye ihehe izivakashi eziningi unyaka nonyaka, njenge-Seafood Festival e-O Grove, eGalicia.
Ukuvakasha kwewayini kunguhlobo lwezokuvakasha oluxhunyaniswe newayini, into esingayibona nasezindaweni eziningi zaseSpain ezidume ngewayini lazo. Izindawo ezifana ILa Rioja, iCatalonia, iGalicia noma i-Andalusia Ngewayini labo lakwaJerez, banamahlelo emvelaphi adonsela amehlo amakhulu ezivakashi afuna ukusondela ezindaweni zokukhiqiza ukubona ama-wineries kanye nezivini nokujabulela isipiliyoni sewayini ngokuphelele, ngaphezu kokunambitha noma izifundo.
Lolu hlobo lwezokuvakasha lwakamuva kakhulu, ngoba ezokuvakasha eziqondiswe kumbono wezemvelo zavela eminyakeni embalwa edlule. Ukuvakasha okukhulu kuchitha izindawo futhi ezikhathini eziningi kubanga izindawo zemvelo ukuthi zonakaliswe. Kungakho okusha ezokuvakasha kwemvelo zenzelwe ukuqwashisa futhi ukuze labo bantu abathanda impilo yemvelo bakwazi ukuhamba ngenkathi futhi benakekela imvelo. Amahhotela angokwemvelo futhi ajwayele ukujatshulelwa ezindaweni zemvelo lapho ungakujabulela ukufunda emvelweni ngaphandle kokukulimaza.
I-Turismo de aventura
Ukuvakasha kwezokuzijabulisa kubhekiswe kulabo bantu abasebenza kakhulu futhi abajabulela zonke izinhlobo zemidlalo. Ezindaweni ezinjengogu olusenyakatho loLwandle iCantabrian noma ugu lwe-Andalusi, sithola amabhishi afanele ezemidlalo anjenge-surfing noma i-kitesurfing, enezikole ezisetshenziselwa ukuqala kulo mdlalo. Kunezindawo eziningi eSpain lapho kungenziwa khona imidlalo efana nokuhamba ngezinyawo izindawo zemvelo, kusukela eGalicia kuya e-Asturias noma eCatalonia. Yize namuhla kulula ukuthola izindawo ezinemizila emisha yokuhamba izintaba ozohamba ngayo.
Ezokuvakasha ezindaweni zasemakhaya yilowo okhulele ezindaweni zasemakhaya nezinokuthula, ezindlini ezinhle zezwe ezilungisiwe ukuze ajabulele le ndlela yokuphila ethule. Izindawo ezifana neGalicia zingochwepheshe kulolu hlobo lwezokuvakasha. Ukuhlala ezindlini ezinhle zasemakhaya, ezizungezwe imvelo kuyisimo sokunethezeka namuhla ukuze ubalekele ukuphithizela kwedolobha.
Lolu olunye uhlobo lwezokuvakasha esingaluthola eSpain ngenkathi yasebusika. Izindawo ezifana ne-Arán Valley eLleida, the IPuerto de Navacerrada eMadrid, iFigigal eHuesca noma iSierra Nevada eGranada ezinye zezindawo ezinikeza izindawo zokungcebeleka zokushushuluza ezilungiselelwe ngazo zonke izinhlobo zezindawo, indawo yokuhlala nobumnandi bomndeni wonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Izinhlobo zokuvakasha eSpain
Ibhishi lase-El Cañuelo